Income Aristocrats: ပိုမိုမြင့်မားသော ၀ င်ငွေ၊ အိပ်စက်ခြင်းနည်းသောညများ - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2019 ဇန်နဝါရီလ 16, 2020 ဝင်ငွေ Aristocrats ငွေချေးစာချုပ်များ, စီးပွားရေး, အများပိုင်သတင်း, Corporate Bonds, မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်, အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ, S&P 500 ၏ခွေးများ - ၂၀၂၀, အယ်ဒီတာရဲ့ Pick, ဝိရောဓိ, Fixed ဝင်ငွေခွန်, ဝင်ငွေ Aristocrats, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ
အချိန်နှင့်အမျှမြင့်မားသော ၀ င်ငွေနှင့်တိုးတက်မှုများကိုဖမ်းယူရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။
တစ် ဦး တည်းငွေသားထုတ်လုပ်မှုအတွက် 4.5% ကျော်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၀ င်ငွေနှင့်ကြီးထွားမှုမြင့်မားမှုများကိုဖမ်းယူနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးအစုရှယ်ယာသုံးပုံနှစ်ပုံသည်ငွေအမြောက်အမြားကိုကြီးထွားမှုနှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၀ င်ငွေအလားအလာတိုးပွားလာခြင်းတို့အတွက်ငွေချေးစာချုပ်ကဲ့သို့သောငွေသားစီးဆင်းမှုကိုပေးသည်။ The ဝင်ငွေ Aristocrats Durig ၏အပြည့်စုံဆုံးအစုရှယ်ယာဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည် တစ် ဦး တည်းငွေသားမျိုးဆက်အတွက် 4.71% ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်.
4.71% တစ် ဦး တည်း Cash Generation ၌တည်၏
၏နှစ်စဉ်ကာလသို့ပြန်သွားသည် 11.21% (နှစ်စဉ် 6-6-17 မှတဆင့် 12-19-19)
A multi ပိုင်ဆိုင်မှုအစုစုကိုမဟာဗျူဟာ Durig ရဲ့လိုပဲ ဝင်ငွေ Aristocrats ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားကျယ်ပြန့်သောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများနှင့်စီးပွားရေးကဏ္businessများတွင်ပါ ၀ င်ခွင့်ပြုသည်။ The သုံးကွဲပြားခြားနားသောမဟာဗျူဟာများရောစပ် Durig ၏ ၀ င်ငွေ Aristocrats Portfolio တွင်ပါ ၀ င်သောကွဲပြားခြားနားသောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစား ၂- အပြာရောင်ချစ်ပ်ရှယ်ယာနှင့်ကော်ပိုရိတ်ငွေချေးစာချုပ်များပါ ၀ င်သည်။
ထုံးစံအတိုင်း ဆက်စပ်မှုမရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများ, အစုရှယ်ယာနှင့်ငွေချေးစာချုပ်များသည်သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် ပို၍ နည်းပါးသောကြားနေအစုစုကိုဖန်တီးရန် Durig ၏ ၀ င်ငွေ Aristocrats အစုစုတွင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်တန်ပြန်ကြသည် မတည်ငြိမ်မှု တစ် ဦး တည်းထိတ်ထက်။
ထိုကဲ့သို့သော Durig ရဲ့အဖြစ် multi ပိုင်ဆိုင်မှုမဟာဗျူဟာများ ဝင်ငွေ Aristocrats အစုစု ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကျဘက်ကိုအန္တရာယ်လျော့ပါးစေရန်ကူညီနိုင်သည်။ မျိုးစုံပိုင်ဆိုင်မှုမဟာဗျူဟာများသည်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအန္တရာယ်များကိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားစေရန်ကူညီသည်။
A Forbes မဂ္ဂဇင်း၏မကြာသေးမီကဆောင်းပါး ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိစီးပွားရေးရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ဆိုင်မှုမဟာဗျူဟာ၏တန်ရာကိုစဉ်းစားသည်။
The Income Aristocrats Portfolio သည် Durig ၏သမိုင်းကြောင်းသုံးခုကိုပေါင်းစပ်ထားသည် အောင်မြင်သောအစုစုကိုမဟာဗျူဟာ, အဘယျသို့ဖန်တီးရန်တွဲဖက်အလုပ်လုပ်မဟာဗျူဟာသုံးခုနှင့်အတူ ဖွယ်ရှိသည်၎င်း၏အများဆုံးဘက်စုံအစုစုသေးအချို့ကိုပိုမိုထိတွေ့မှု အမြင့်ဆုံးအလျှော့ပေးလိုက်လျော အမျိုးမျိုးသောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများ, စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ဖလှယ်မှု၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အရင်းအနှီးမျိုးစုံချဉ်းကပ်မှုဖြင့်ထုတ်လုပ်သောဝင်ငွေစီးဆင်းမှု (နှင့်တစ်ခုလုံးအဖြစ်အစုစု) သိသိသာသာကောင်းစွာအမျိုးမျိုးဖြစ်လာသည်နှင့်တစ်ခုတည်းပိုင်ဆိုင်မှုမဟာဗျူဟာ၏ဝင်ငွေစီးထက်ပို။ တည်ငြိမ်သည်။
အစုရှယ်ယာအမျိုးမျိုးရှိပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ငွေသားစီးဆင်းမှုနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားစတော့ရှယ်ယာနှင့်ငွေချေးစာချုပ်စျေးကွက်များ၏လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။ သမိုင်းမတည်ငြိမ်မှုကိုလျှော့ချ.
A မကြာသေးမီဆောင်းပါး ထိတ်လန့်ဖွယ်စာရင်းဇယားကိုဖော်ပြခဲ့သည် ဘယ်မှာအမေရိကန်တွေ၏ 33% ရာခိုင်နှုန်းကလစာမှလစာနေထိုင်နေကြရသည်။ ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာမလုံခြုံမှုတွေအားလုံးနဲ့အတူ \_ t မသေချာမရေရာချင်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေပါ, ပြီးနောက် ဝင်ငွေ Aristocrats ဖြစ်နိုင်သမျှဖြေရှင်းချက်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာပါပြီ။
မင်းရဲ့ဝင်ငွေဘယ်လောက်လုံခြုံမလဲ သင်ပိုမိုတည်ငြိမ်မှုလိုအပ်ပါသလား ဝင်ငွေပိုရလား ၀ င်ငွေတိုးတက်မှုလား။
လုံခြုံရေးကိုစိတ်ထဲ ထား၍ Durig ၏ ၀ င်ငွေ Aristocrats အစုစုသည်ဆက်နွယ်မှုမရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားနှစ်မျိုး၏စီးဆင်းမှုကိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်၊ ဝင်ငွေ - အာရုံစူးစိုက်မဟာဗျူဟာနှင့်များစွာသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတစ် ဦး အဆင့်ကိုအောင်မြင်ရန်မြောက်မြားစွာစက်မှုလုပ်ငန်း span ကြောင်းကုမ္ပဏီများသည် ဝင်ငွေအမျိုးမျိုး အငြိမ်းစားယူခြင်းဖြင့်သင်၏လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုမြှင့်တင်ရန်အလားအလာရှိသည်။
အစုစုထဲရှိကော်ပိုရိတ်ငွေချေးစာချုပ်များမှထုတ်လုပ်သောကူပွန်အကျိုးစီးပွားသည်အပြာရောင်ချစ်ပ်ခွဲဝေမှုမြင့်မားမှုနှင့်ပေါင်းစပ်။ သာလွန်ကောင်းမွန်စေသည် ဝင်ငွေတိုး, နှင့်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အပြာရောင်ချစ်ပ်ခွဲဝေ passively မှကူညီပေးသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဝင်ငွေတည်ငြိမ်နှင့်ကြီးထွားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုညအချိန်တွင်ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်ခွင့်ပြုရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
အမျိုးမျိုးကွဲပြားစေရန် Durig ၏ဘက်ပေါင်းစုံချဉ်းကပ်မှု၏နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်မှာတည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေစီးဆင်းမှုဖြစ်သည် တစ် ဦး တည်းငွေသားထုတ်လုပ်မှုအတွက် 4.5% ကျော်နှင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသိသိသာသာကြီးထွားမှုအတွက်အလားအလာ။
တိုးတက်မှုသည်အဓိကအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည် ဝင်ငွေ Aristocratsအတူ ကလွှမ်းခြုံမဟာဗျူဟာတစ်ခုချင်းစီ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကြီးထွားမှုအဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်း။
Income Aristocrats တွင်အပြာရောင်ချစ်ပ်များသည်အဓိကကြီးထွားမှုအတွက်အကြီးမားဆုံးသောပံ့ပိုးသူဖြစ်ပြီးအချိန်ကောင်းနှင့်အတူစျေးနှုန်းတက်လာသည်။ အစုရှယ်ယာတွင်ရှိသောကော်ပိုရိတ်ငွေချေးစာချုပ်များသည်ကူပွန်အတိုးပေးငွေများမှတစ်ဆင့် ၀ င်ငွေကိုထုတ်လုပ်ရာတွင်အလွန်ထိရောက်သည်။
ဤအမြတ်ဝေစုများတိုးပွားလာသည်နှင့်အပြာရောင်ချစ်ပ်အရစ္စတိုတယ်များ၏ခွဲဝေများကိုတိုး။ ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာသည်နှင့်အမျှကြီးထွားမှုသည် ပို၍ ပင်သိသာထင်ရှားသည်။
၀ င်ငွေ Aristocrats နှင့်ပိုမိုသောအရာများနှင့်ပတ်သက်သောနောက်ဆုံးသတင်းများကိုလက်ခံရရှိရန်အောက်တွင်စာရင်းသွင်းပါ။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ဘဏ္Advာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ရေ များမှာ ကြီးကြပ်ရေး နှင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်ပြုမူရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဤအချက်ကြောင့်စိတ် ၀ င်စားမှုတည်ဆောက်မှုသည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုကိုဆက်စပ်သည့်အကြံပေးသူများ၏မက်လုံးနှင့်အတူ၎င်းကိုပြီးမြောက်စေရန်ဆက်ဆံရေးတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူပိုမိုများပြားလာသောအခါအကြံပေးသည် ပို၍ ရိုးရှင်းလွယ်ကူစေသည်။
Durig ရဲ့ ဝင်ငွေ Aristocrats အစုစု ထုတ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည် မြင့် (နှင့်ကြီးထွားလာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှငွေသားစီးဆင်းမှုအဆင့် များစွာသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ, ကုမ္ပဏီများနှင့်ဖလှယ်မှုများအနှံ့ကျယ်ပြန့်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများမှ။ အစုစုအတွက် Non- ဆက်စပ်မှုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကူညီပေးသည် အမျိုးမျိုးတစ်ပြိုင်ဘက်အဆင့်နှင့်သိသိသာသာအတွက်ကူညီပေးသည် အစုစုကိုမတည်ငြိမ်မှုကိုလျှော့ချ လည်းပဲ ဆိုးကျိုးများ။ မတည်ငြိမ်မှုများကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စေပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအားကိုးနိုင်သောအလားအလာရှိသော ၀ င်ငွေများထုတ်လုပ်ရန်ပုံသေ ၀ င်ငွေနှင့်ရှယ်ယာလမ်းကြောင်းများ၌ပါ ၀ င်ခွင့်ကိုပေးသည်။
၀ င်ငွေတည်ငြိမ်ရေးအတွက်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဖွံ့ဖြိုးမှုအလားအလာမြင့်မားစေရန် ရည်ရွယ်၍ အလွန်အမင်းမတူကွဲပြားသောများပြားလှသောပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ၀ င်ငွေမြင့်မားမှုအစုစုကိုရှာဖွေနေသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် \_ t ရေ ယုံကြည်တယ် ဝင်ငွေ Aristocrats အစုစု is ညအချိန်တွင်ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်ရန်ကူညီပေးသောထူးခြားသည့်ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခု ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံထောက်ခံမှုနှင့်အတူအလွန်နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာ။
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရလိုပါက Durig's ဝင်ငွေ Aristocrats အစုစု, မခေါ်ကျေးဇူးပြုပြီး ရေ at (971) 327-8847, ဒါမှမဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ info@durig.com.
ဤဆောင်းပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Durig Capital သည်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ဤစာပေးစာယူတွင်ပါရှိသောသတင်းအချက်အလက်သည်သတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောရင်းမြစ်များမှရရှိသည်။ သတင်းအချက်အလက်အာမခံချက်မျှလမ်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်အခြေအနေများစီမံချက်ကိုကြိုးစားလုပ်ဆောင်သည့်အခါမည်သည့်အာမခံချက်မျှဆိုလိုခြင်းသို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်ပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်သည်အခကြေးငွေနှင့်မပြည့်စုံကြောင်းအစီရင်ခံထားသည်။ ၁၂-၁၉ မှ ၁၉ အထိနှစ်စဉ်ပြန်လာခြင်းသည်ပျမ်းမျှပျမ်းမျှ FX12၊ Dog of the S&P နှင့် Dow Portfolio ၏ Dogs မှ 19-19-2 မှ 6-6 ကာလအတွင်းပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။ ၁၉ ။
ယခုအခါတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသည် Freelance Global Gig Low Cost Market ဈေးကွက်သို့လုံး ၀ ပွင့်လာပြီဖြစ်သည်